बदलिँदो माक्र्सवादी चेहरा- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
बदलिँदो माक्र्सवादी चेहरा
हिंसात्मक आन्दोलन र त्यसले गरेको जनधनको क्षतिका सम्बन्धमा बाबुरामले पश्चात्ताप गर्नुपर्छ । क्षमाशील नेपाली जनताले अवश्य पनि क्षमा दिनेछन् ।
भाद्र १६, २०७५ जीवा लामिछाने
काठमाडौँ — एकताका एक जना मिथझैं पात्र थिए— बाबुराम भट्टराई । बाबुराम एसएलसीका बोर्ड फस्ट थिए, पढाइका इन्जिनियर थिए, राजनीतिका उम्दा पात्र थिए । तर, पढाइअनुसार बाबुराम न इन्जिनियर बने, न राजनीतिमा आदर्श बन्न सके । वर्षांैं बोकेको कम्युनिस्ट दर्शनको ‘बाबुराम रंग’ मा पुँजीवादी रंग घुलमिल हुन थालिसकेको छ । यदि कम्युनिस्ट दर्शनलाई एउटा रंग र पुँजीवादी दर्शनलाई अर्को रंग मान्ने हो भने बाबुरामको दर्शन ‘खैरो रंग’ मा परिणत हुँदै छ ।
हाइस्कुल पढ्दा बाबुराम भट्टराई हाम्रा लागि मिथजस्ता थिए । किनभने उनी एसएलसी बोर्ड फस्ट र पढाइमा कहिल्यै दोस्रो नभएका विद्यार्थी । पढाइमा राम्रो गर्न चाहने सबैका लागि उनी आदर्श थिए । मेरा लागि पनि आदर्श थिए ।
कलेज पढ्दा उनी सपनाजस्ता भए । किनभने म पनि उनीजस्तै इन्जिनियर बन्ने सपना साकार पार्न पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा पढ्दै थिएँ र मैले उनलाई आदर्श बनाएको थिएँ ।
तर, अचम्म त के भने, पढाइ सकेर इन्जिनियर बनेपछि न उनले इन्जिनियर बनेर काम गरे, न मैले । हाम्रो पढाइले हामीलाई आफूजस्तै बनाउन सकेन । उनी राजनीतिमा लागे, म व्यवसायमा ।
राजनीतिक संघर्षका क्रममा ०५२ पछि उनी भूमिगत भए र, फेरि ‘मिथ’ झैं बने । तर, मेरा लागि आदर्श बन्न सकेनन् । किनभने उनले बोकेको राजनीतिक विचार मेरा लागि आदर्श बन्न सकेन । त्यतिले नपुगेर जब उनले हतियार बोक्ने राजनीतिको नेतृत्व गर्न थाले, उनी मेरो आदर्श र सपनाबाट खसे । नेपाललाई जस्तो देश बनाउँछौँ भनेर उनी राजनीतिमा हतियार उठाएर लागेका थिए, त्यही देशमा बसेर उनले चाहेजस्तो व्यवस्थाको दुर्दशा मैले देखिसकेको थिएँ र केही हदसम्म भोगेको पनि थिएँ । त्यो देशको नाम हो—रसिया ।
मेरो कर्मभूमि ।
तिनै व्यक्ति, जो कहिले आदर्श बने, जो कहिले आदर्शबाट खसे, २०१८ को जुलाई/अगस्त महिनामा दुई साता युरोप भ्रमणमा आए । संयोगबस ती दुई सातामध्ये केही दिन मैले उनलाई साथ दिने र केही अन्तरंग कुराकानी गर्ने मौका पाएँ ।
उनीसँग यात्रा गर्दा मैले सबैभन्दा धेरै ती दिनहरू सम्झिएँ, जुन दिन उनी म पढिरहेको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा सिनेमाको अतिथि पात्रझैँ भिजिटिङ प्रोफेसरका रूपमा यदाकदा आएका थिए । त्यतिबेला हाम्रा लागि उनी चम्किला विम्ब बनेका थिए ।
कहिलेकाहीँ नभेटीकन बनेको मानिसको धारणा भेटघाट गहिरिंदै जाँदा कम हुँदै जान्छ । तर, डा. भट्टराईको हकमा त्यसो भएन । पहिलो पटक डा. भट्टराईसँग चिनजानको अवसर माओवादी द्वन्द्वको अन्त्यपछि शान्ति प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै नयाँ बजारको डेरामा भएको थियो । त्यतिबेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र डा. भट्टराई एकै घरमा डेरा गरेर बस्थे । त्यही डेरामा गैरआवासीय नेपाली अभियानका विषयमा जानकारी गराउने प्रसंगमा दुई–चार पटक हाम्रो भेटघाट भएको थियो । त्यसयता म नेपाल आएको बखत र उनीसँग समय भएको बखत भेटघाट हुँदै जान थाल्यो । यी भेटमा देशको समृद्धिका लागि गैरआवासीय नेपाली संघले उठान गरेका धेरै विषयमा उनका धारणाहरू स्पष्ट रहेको मैले पाएको थिएँ ।
म गैरआवासीय नेपाली संघको अध्यक्ष हुँदा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा उनले आर्थिक सल्लाहकार परिषद् बनाएका थिए । सरकारको नेतृत्व गर्ने क्रममा यो परिषद्को उद्देश्य देशलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने उनको चिन्तनको उपज थियो भन्ने मलाई लाग्छ । उक्त परिषद्मा गैरआवासीय नेपाली संघको अध्यक्ष हैसियतमा मलाई मनोनीत गरिएका कारण केही बैठकमा मैले आफ्ना धारणा राख्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यति बेला उनी विद्वान् मात्रै होइन, अरूको विचार धैर्यपूर्वक सुनेर विश्लेषण गर्ने नेताको रूपमा मैले महसुस गरेको थिएँ ।
यी सबै भेटघाटमा जतिसुकै सुमधुर कुरा हुँदा पनि म बेलाबेलामा माओवादी द्वन्द्व अनि त्यसले निम्त्याएका विभिन्न पक्ष सम्झन्थें र, सम्झन्छु । जसले बाबुआमा, छोराछोरी, जीवनसाथी, आफन्त र साथीहरू गुमाए, तिनको टुहुरो अनुहार सम्झन्छु । र, त्यसले ल्याएको परिणामस्वरूप देशको अहिलेको अनुहार सम्झन्छु । अनि अझै पनि डा. भट्टराईको फेसबुक र ट्विटरमा पोस्ट भएका विचारमाथि ठूलो समूहले गरेको विरोध, विद्रोह र गाली सम्झन्छु ।
उनको अध्ययन र विचारसँग प्रभावित भए पनि उनको राजनीतिक विचारसँग पटक्कै प्रभावित नभएको र उनी एक रूढ राजनीतिक विचार बोक्ने नेताको रूपमा धारणा बनिरहेका बेला यो पटक झन्डै एक साता उनीसँग बिताउँदा उनमा देखिएको परिवर्तनले मलाई दुई फरक रंग मिसाउँदा देखापर्ने तेस्रो रंगजस्तै नयाँपनको महसुस भयो । यो लेख त्यही तेस्रो रंग अर्थात् व्यक्तित्वको विषयमा छ, जुन विषयमा नेपाली मिडियामा उति लेखिएको छैन अथवा मैले पढ्न पाएको छैन ।
मानिसको स्वभाव नै हो, ऊ सजिलो बाटो हिँड्न रुचाउँछ । छोटो समयमै सबै किसिमका सुख–सुविधा प्राप्त गर्न चाहन्छ । तर, उनी इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गरेपछि प्राप्त हुने मान–सम्मानसहितको जागिर वा परामर्शबाट पाउन सकिने ठूलो आम्दानी छाडेर नयाँ तर कठिन राजनीतिक बाटोमा हिँड्न रुचाए । उनको राजनीतिक बाटो र पाटोको म कदापि समर्थक होइन र, त्यसको कडा आलोचक पनि हुँ । तर, देश र समाज परिवर्तन हुन्छ भने आफूले पाएको मान–सम्मान र सुविधा त्याग्न पछि पर्नुहुन्न भन्ने उनको जीवनको आदर्शबाट म प्रभावित भएको छु । व्यक्तिगत रूपमा त्यो बेला म छक्क परेको थिएँ, जब उनले सरकारको नेतृत्वसमेत गरिरहेको शक्तिशाली माओवादी पार्टी र सांसद पद त्यागेर नयाँ शक्ति पार्टीको गठन गरेर नितान्त नौलो बाटो हिँड्ने बाटो रोजेका थिए ।
एउटा उमेरमा मानिसले जोसमा कुनै निर्णय गर्न सक्छ, इन्जिनियरिङबाट कठिन राजनीतिक बाटोमा लाग्नुलाई कतिले त्यस अर्थमा पनि लिने गरेको पाएको छु । हुन पनि युवा उमेरमा धेरै मानिसलाई एकपल्ट कम्युनिस्ट दर्शनले प्रभावित पार्छ भन्ने चलन छ । तर, मैले त्यो बेला उनको कुरा र काममा फरक छैन भन्ने कुरा महसुस गरेको थिएँ, जब भएको सांसद पद त्यागेर नयाँ दलको घोषणा गरे । त्यो बेला उनले देशमा गणतन्त्र आएपछि माओवादी पार्टीको औचित्य सकिएको र देश विकास गर्न नयाँ दलको आवश्यकता भएको दाबी गरेका थिए । यो पटकको भेटमा पनि उनले अबको बाटो देशको समृद्धि हो भन्ने कुरामै जोड दिए ।
कुनै व्यक्तिले समृद्धिको कुरा गर्नु र आफ्नातर्फबाट सक्दो पहल गर्नु फरक कुरा हो । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएका केही काम आज पनि सम्झनलायक छन् । र, सत्ताबाहिर रहँदा पनि उनले केही न केही गरिरहेको देख्दा उनको बोली र व्यवहारमा खासै अन्तर म पाउँदिनँ ।
नयाँ दल खोल्दा कतिपयले डा. भट्टराईको विचारमा परिवर्तन आएको रिपोर्टिङ गरेका थिए । तर, रुस र जर्मनीको भ्रमणमा यस विषयमा कुरा गर्दा माक्र्सवादप्रतिको उनको रुचि र दर्शनमा अझै पनि आकर्षण रहेको पाएँ । परम्परागत माक्र्सवादलाई जस्ताको तस्तै मान्नेभन्दा पनि समय र परिस्थितिअनुसार परिवर्तन गर्ने कुरामा उनको जोड थियो । तर, माक्र्सवादप्रति जुन जडता र पकड उनमा पहिलेपहिले देखिन्थ्यो, त्यो आजभोलि अर्कै रूपमा परिवर्तन हुन थालेको महसुस गरिरहेँ ।
रुस यात्राको क्रममा मेरो सबैभन्दा विमति रहेको माओवादी द्वन्द्व विषयका केही कुरा कोटयाएँ । एक प्रसंगमा मैले उनलाई सोधे, ‘त्यति धेरै धनजनको क्षति भएको माओवादी आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि चाहिं केलाई मान्नुहुन्छ ?’
त्यसको उत्तरमा उनले भने, ‘झन्डै २ सय ५० वर्षसम्म रहेको सामन्ती र अर्धदासजस्तो अवस्थाबाट हामीले मुक्ति पायौं । राजतन्त्र जसरी पनि फाल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो, त्यसमा हामी सफल भयौं ।’
उनले भनेजस्तो राजतन्त्र फाल्नु मात्रै मुख्य उपलब्धि हो भन्ने कुरामा पनि मेरो ठूलै विमति छ । के दरबार हत्याकाण्ड नभएको भए राजतन्त्र फ्याँकिन्थ्यो ?
उनलाई सत्कार गरिरहेको अवस्थामा यस्ता विषयमा थप बहस गर्नु उचित ठानिनँ । उसो त घुम्दै गर्दा मैले बेलाबेलामा अलिकति ‘प्रोभोकेटिभ’ प्रकृतिका प्रश्नहरू नगरेको होइन, विशेषगरी द्वन्द्वकालका विषयमा केन्द्रित भएर । त्यस्ता प्रश्नहरूको उनले सहजै उत्तर दिइरहेका थिए । एकपल्ट मैले सोधेँ, ‘द्वन्द्वकालमा भएका कामहरूप्रति कुनै खेद छ कि ?’
मेरो यो प्रश्नमा उनले लामो तर्क गर्दै ‘जनयुद्ध’ पुरानो सामन्तवादी प्रथालाई फयाँक्न सफल भएको दाबी गरिरहे ।
द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षबाट भएका ज्यादतीमा धेरै धनजनको क्षति भएको छ । त्यसलाई अब इतिहासको एउटा विषय बनाएर अघि बढ्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । त्यस विषयमा ‘त्यो कदम गलत थियो’ भनेर एक पटक माफी माग्दै अगाडि बढे उनको इज्जत बढ्ने थियो भन्ने मलाई यात्राभर लागिरहयो । उनका नयाँ विचार सुन्दा उनमा परिवर्तन आएको महसुस त हुन्थ्यो नै, साथै पुराना कुराप्रति पश्चाताप नै गर्ने अवस्थामा भने नपुगेको महसुस गरेपछि मैले आफ्नो मनको यो कुरा उनलाई भनिनँ ।
उनीसँग म रुस गएको र उनी जर्मनी आउँदै छन् भन्ने कुरा छोराहरूलाई थाहा थियो । उनका कुरा सुन्न छोराहरू पनि उत्सुक थिए । घरमा नेपाल र राजनीतिक विषयमा कुरा हुँदा मैले बेलाबेलामा भन्ने गर्छु, ‘डा. भट्टराई चिन्तनशील राजनेता हुनुहुन्छ ।’
मेरो यस्तै व्याख्या सुनेका कारण छोराहरू उनलाई भेट्न उत्सुक भएका होलान् । नभन्दै फ्रयांकफर्टमा बिदा हुनु अघिल्लो साँझ उनीसँग पारिवारिक भेटघाट र खानपिन गर्ने अवसर मिलेको थियो । कलेज र माध्यमिक शिक्षा पढिरहेका छोराहरू अनुराग र अनुकृत दुवैले यो मौकामा जमेर उनीसँग तर्क गरे । उमेरले सानै भए पनि आधुनिक शिक्षा पाएका दुवै छोराको विचार मेरो सोचभन्दा फरक नभएकाले छोराहरूको तर्कलाई मैले आफ्नै कुरा मानेर खुसी भइरहेको थिएँ । एक वर्षपहिले मेरै अघि कार्ल माक्र्सको ट्रियरस्थित संग्रहालयमा राखिएको पुस्तिकामा अनुकृतले लेखेका थिए, ‘माक्र्सवाद एउटा उन्नत दर्शन हो र यो दर्शन मानवताका लागि साँच्चै सुन्दर कुरा हुन सक्ला । तर... कहिले ?’ कुरा गर्दै जाँदा अनुकृतले यही प्रश्न डा. भट्टराईलाई सोधे ।
यो प्रश्नमा डा. भट्टराईले मौनताबाट उत्तर दिनुपरेको थियो । दुवै छोराहरू भन्दै थिए, ‘मानव सभ्यता पूर्ण रूपमा रोबोट युगमा प्रवेश गर्‍यो भने मात्रै माक्र्सले परिकल्पना गरेको समाज बन्न सक्ला, अन्यथा त्यो सम्भव नहुने दर्शन हो ।’
छोराहरूको यो निष्कर्षमा डा. भट्टराई मुस्कुराउँदै थिए ।
बिदा हुने बेलामा भने मैले यति बेलासम्म मनमा लागेको कुरा नलुकाई भनें, ‘कार्ल माक्र्स गएको दुई सय वर्षमा उनी सबैभन्दा धेरै पढिएका दार्शनिक चिन्तक हुन् । त्यस अर्थमा म उनलाई सम्मान गर्छु । उनको दर्शन जति पढ्दै जान्छु, उनका कुरा मलाई त्यति नै बढी काल्पनिक र असम्भव लाग्ने गर्छन् । माक्र्सले परिकल्पना गरेको वर्गविहीन र राज्यविहीन आदर्शवादी समाज एक स्वप्नलोक मात्रै हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । उनले परिकल्पना गरेको समाज रामायणमा उल्लेख गरिएको ‘रामराज्य’ जस्तै दन्त्यकथा हो ।’
मेरो यो भनाइमा डा. भट्टराईले विमति जनाएनन् । केही वर्षयता उनमा माक्र्सवादी दर्शनका विषयमा निरन्तर परिवर्तन आएको हामी सबैले महसुस गर्दै आएको कुरा हो । यात्राभर पटकपटक माक्र्स आफ्ना गुरुजस्तै भएको बताइरहे पनि समयअनुसार त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा पनि सँगै बताइरहे । एक अर्थमा मैले यसलाई उनमा आएको परिवर्तनका रूपमा महसुस गरेँ । र, उनको माक्र्सवादी व्यक्तित्वमा पनि क्रमश: परिवर्तन आएर नयाँ रंगको व्यक्तित्व बनिरहेको महसुस यात्राभर गरिरहेँ ।
राजनीतिक दर्शनलाई पर राख्ने हो भने डा. भट्टराईलाई आदर्श व्यक्ति मानेर मैले गलत गरिनँ भन्ने पटकपटक लागिरहेको थियो । एक जना नेता कस्तो हुनुपर्छ भनेर राजनीतिशास्त्रीहरूले व्याख्या गरेजस्तै डा. भट्टराईको व्यक्तित्व देखिन्छ । यात्रा अवधिभर मैले महसुस गरेँ, उनको खानपिन निकै सादगी छ । यस्तै खाना खानुपर्ने, यस्तैमा बस्नुपर्ने भन्ने कुनै आग्रह उनमा देखिएन । विशेष खालको सोख पनि पाइनँ । मदिरा केवल औपचारिक टोस्ट प्रस्ताव गर्दा मात्रै उठाउने बानी रहेछ । मदिरालाई मुखसम्म लगेको पनि मैले देखिनँ । टेबुलमा बसिरहेको मदिरा नचलाउने तर एकदुई मासुका टुक्रा लिने, बाँकी भोक शाकाहारी भोजनले पूरा गर्ने बानी रहेछ ।
युरोपको ऐतिहासिकता हेर्न अलि धेरै बेर हिँड्नैपर्ने हुन्छ । ६५ वर्ष पुगिसकेका डा. भट्टराई थाकेको वा थाकेको भाव देखाएको अनुभव गरिनँ । लाग्यो, उनको थकाइ युरोपमा ऐतिहासिक दृश्यले मेटाइदिएका हुन् । आधुनिक सपिङ सेन्टर, सिनेमाघर आदिभन्दा ऐतिहासिक महत्त्वका ठाउँ हेर्नमा उनको बढी रुचि रहेको पाएँ । खर्च गर्नेभन्दा जसरी हुन्छ, मितव्ययी हुन खोज्ने स्वभाव पनि पाएँ । पूर्वप्रधानमन्त्रीको मर्यादालाई सम्मान गर्दै आयोजकका तर्फबाट बिजिनेस क्लासमा टिकट लिन खोज्दा उनले विनम्रतापूर्वक त्यसो नगरिदिन अनुरोध गरे ।
गम्भीर प्रकृतिको व्यक्ति भएकाले यात्रामा उनी खुल्दैनन् भन्ने लागेको थियो तर, यात्राभर भनिएजस्तो अन्तर्मुखी स्वभाव मैले अनुभव गरिनँ । विज्ञान, साहित्य, दर्शन र विश्व इतिहासजस्ता विषयमा हाम्रो रुचि मिलेकाले पनि होला, यात्रा सहज रहयो । सार्वजनिक रूपमा देख्दा प्राय: हँसिलो नदेखिने उनमा केही हदसम्म हास्यचेत पनि रहेछ ।
एकपल्ट मैले उनको ट्विटर फलोवर धेरै भएको कुरा कोटयाउँदा उनले भने, ‘तपाईंहरू धनका हिसाबले मिलेनियर, मचाहिं ट्विटर फलोवरका हिसाबले मिलेनियर ।’
त्यति मात्र होइन, फ्रयांकफर्टको प्रसिद्ध ‘लभ लक ब्रिज’ मा घुम्दै गर्दा उनकी पत्नी हिसिला यमीलाई रमाइलो पारामा भने, ‘ल, यो ब्रिजमा हामी पनि आफ्नो प्रेम लक् गरौँ ।’
उनले हास्यरसमा यी कुरा भनिरहँदा मलाई लागिरहेको थियो— पार्टीका बैठकहरूमा अनावश्यक गफ गर्ने कुरामा मात्र सायद उनमा गम्भीरता देखिन्छ । उनलाई कहाँ कस्तो बेलामा रमाइलो गर्नुपर्छ राम्रैसँग थाहा रहेछ ।
हामी फ्रयांकफर्ट घुम्दै गर्दा त्यस दिन निकै गर्मी थियो । माइन नदी छेउ पुगेपछि मैले उनलाई केही बेर माइन नदीमा नौका विहार गर्ने हो कि भनेर प्रस्ताव गरें । तर, उनले नौका विहारको आनन्द लिनुभन्दा नजिकै रहेको ऐतिहासिक संग्रहालयमा गएर केही ज्ञान बढाउनु राम्रो हो कि भनेर आफ्नो ज्ञानको भोक देखाए । आनन्दको भोकभन्दा जान्नुको भोक धेरै भएका उनमा देश बनाउनुपर्छ भन्ने हुटहुटी प्रचुर रहेको देखेँ । हाम्रै जीवनकालमा आर्थिक प्रगति सम्भव छ भनेर बारम्बार त्यसको सम्भावना देखाइरहेको पाएँ । अबको दिशा भनेको आर्थिक क्रान्तिकै हो । देशमा आर्थिक विकास गर्नका लागि सबै देशको विकासको सूत्र एउटै हुँदैन । हरेक देशले अवलम्बन गरेका नीतिहरूमध्ये आफूलाई सुहाउँदा पक्षहरूलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विचार उनले व्यक्त गरे ।
रुस, फ्रान्स, बेल्जियम, जर्मनीलगायत केही देशहरूका संसद् र थिंकटयांकसँगको भेटघाट तथा अन्तक्र्रियामा पनि उनको गहिरो तयारी देखिन्थ्यो । भेटघाट क्रममा ती देशको राजनीतिक र विकास प्रक्रिया बारेमा उनीहरूकै मुखबाट सुन्ने उत्सुकता निकै रहेको देखियो । रुसका सांसदसँगको भेटमा त्यति विशाल साम्राज्य के कारणले ढल्यो (?) भनेर सत्तारूढ र कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूसँग पनि सोधपुछ गरेका थिए ।
रुस र विशेषगरी अक्टोबर क्रान्तिका विषयमा गहिरो जानकारी राख्नु स्वाभाविक भए पनि विज्ञान, प्रविधि, विश्व राजनीति, भूगोल आदिका विषयमा जति पनि छलफल गर्न सकिने गरी जानकारी देख्दा मेरो मनमा उनीप्रति अझ श्रद्धा बढिरहेको थियो ।
मस्को र सेन्ट पिटर्सबर्गका संरचना हेर्दा उनले भनेका थिए, ‘यो देश भौगोलिक हिसाबले मात्रै ठूलो होइन कि यहाँका नेता र नागरिकमा हरेक चीजहरू विशाल बनाउनुपर्छ भन्ने सोच पनि पहिलेदेखि नै रहेछ ।’
उनको यो भनाइमा नेपालीहरूमा यस्तो सोच चाँडै आइदिए हुन्थ्यो भन्ने भाव झल्किरहेको देखिन्थ्यो ।
हरेक मानिसको आफ्नै दर्शन र विचार हुन्छ । शुभचिन्तकका रूपमा अमूक व्यक्तिले यही दर्शन बोकेर हिँडेको राम्रो भनेर इच्छा राखेर केही हुँदैन । तर, यस पटकको यात्रामा उनको दुई फरक विचारको मिश्रण भएको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाएँ । उनले वर्षौं बोकेको कम्युनिस्ट दर्शनको रंगमा पुँजीवादी रंग घुलमिल हुन थालेको रहेछ । यदि कम्युनिस्ट दर्शनलाई एउटा रंग र पुँजीवादी दर्शनलाई अर्को रंग मान्ने हो भने डा. भट्टराईको दर्शन खैरो रंगमा परिणत हुँदै छ । र, यो रंग वर्षौंअघि लामो भूमिगत राजनीति त्यागेर उनीसहित माओवादी नेता सार्वजनिक हुँदा लगाएको एकैनासे खैरो रंगको पहिरनभन्दा बढी गाढा भएको मैले महसुस गरेँ । र, मलाई लाग्छ, यो रंगले उनमा देशलाई परिवर्तन गर्न हुटहुटीलाई अझ बढी परिपक्व बनाएको छ ।
टुंग्याउनीमा उनलाई भन्न मन लाग्यो, ‘डा. साहेब, तपाईंको परिवर्तित खैरो दर्शन देख्दा खुसी छु तर, अझै पनि पूर्ण सहमत छैन । यद्यपि मलाई यो पनि थाहा छ, बिरालो कालो होस् या सेतो, त्यसले केही फरक पार्दैन, त्यसले मुसा मार्छ कि मार्दैन भन्ने कुराले मात्र फरक पार्छ तर हिंसात्मक आन्दोलन र त्यसले गरेको जनधनको क्षतिका सम्बन्धमा पश्चात्ताप गर्नुपर्छ । क्षमाशील नेपाली जनताले अवश्य पनि क्षमा दिनेछन् । त्यसपछि तपाईंको राजनीतिक जीवनले अझ उचाइ लिनेछ । तपाईंको उचाइले देशको उचाइ बढाउन सघाउनेछ ।’
‘स्याब्बास् केटा !’
मेरा नौनाडी गले, ज्यान शिथिल भएर फत्रक्क भयो, खल्खली पसिना आयो, सय कोस पार गरेपछिको थकाइले चुर छुजस्तो लाग्यो ।
भाद्र १६, २०७५ सिपी अर्याल
काठमाडौँ — ए केटा रिजेल्ट आयो अरे उठ् ।’ बुवा बिहान अचानक आएर ओढिराखेको बर्को याँकिदिनुभयो ।निद्राले मस्तराम थिएँ । जिन्दगीको सबभन्दा आनन्ददायी क्षणमा, एलएलसीपछिको समय । घरकाले पढ् कि पढ् भन्न पनि पाउँदैनथे । म फुक्काफाल । क्या आनन्द !र, आयो रिजल्ट !
ठूलाठूला आँखा बनाउँदै असिनपसिन भएर बुवाको अनुहारमा ट्वाल्ल परेर हेरेँ ।
‘नआत्ती ! पास भैहाल्छस् नि !’ बुवाको सान्त्वनाले मन भरिएन । परीक्षाफल आएको थियो तर फल थाहा पाइसकेको थिइनँ । जर्‍याकजुरुक उठेर आँगनमा निस्किएँ । के गर्ने, कहाँ गएर रिजल्ट हेर्ने ? केही मेसो पाइनँ । डरले भाउन्न भएँ । गोरखापत्र साँझ मात्रै आइपुग्थ्यो । रिजल्ट हेर्ने अरू कहाँ होस् उपाय ?
‘प्रकाश दाइलाई हेर्न भन् ।’ ममीले काइदा सुझाउनुभो । ठूलोबुवाको घरमा ल्यान्डलाइन फोन थियो, त्यहीँबाट प्रकाश दाइको काठमाडौँको डेरामा फोन लगाएँ ।
‘हेलो पर्काश दाइ । ०४९०३७७ क्यू को रिजल्ट हेर्दिनू न ।’
‘क्व पर्काश ?’ यति आत्तिएको थिएँ कि, उता फोन उठ्नेबित्तिकै फरर बोलेुँछु । प्रकाश दाइ डेरामा बस्छन्, फोन घरपट्टीले उठाउँछन् भन्ने बिर्सेछु । कर्कश आवाजले झन्डै गाली गरेपछि पो याद भयो । सायद उनी घरपट्टी थिइन् ।
‘त्याँ डेरामा बस्ने...’
‘येकछिनमा गर...’ धडयाम्म फोन राखेको आवाज आयो । एक छिनमा गर्नुपर्ला सोचेर बाहिर आँगनमा निस्कँदै थिएँ, घरअगाडि बाटोमा उभिएको कसैले भनेको फयाट्टै सुनेँ, ‘सिद्धार्थ बोर्डिङका सबै विद्यार्थी फस्र्ट डिभिजनमा पास भए अरे !’
यति भनेर ती मान्छे कता गइहाले । अनुहार चिनिनँ ।
खबर सुनेर आँगनमा आएर पृथ्वीनारायण शाह उभिएको शैलीमा फनन घुम्दै नाचेँ । बुवा, ममीको अनुहार चम्किलो देख्थेँ ।
‘१० पास भइस् बाबु ?’ ओसारामा बस्नुभएको हजुरीले सोध्नुभो । दगुर्दै गएर गम्लङ्गै अँगालो हालेँ, म्वाई खाएँ ।
‘ल राम्रो भो परमेश्वर ।’ हजुरी खुसी हुनुभो ।
तर, अचानक सम्झिएँ । ती बताउने मान्छे को थिए ? फस्र्ट डिभिजनमा पास भएको होइन, फेलै भएको हो रहेछ भने ? सम्झँदा मात्रै कहाली लाग्यो । फेरि प्रकाश दाइ सम्झिएँ । फोन गर्न ठूलोबुवाकोमा लम्किएँ ।
‘सिद्धार्थका सप्पै फस्र्ट डिभिजनमा पास भए अरे । स्कुलबाट फोन आथ्यो...’ ठूलोबुवा कराउनुभो । अब ढुक्क भएँ ।
भोलिपल्ट स्कुल गएँ । पवन सरले उर्दी जारी गरे, ‘साइन्स लिएर पढ्ने, डाक्टर हुने । यताउति होइन...’
‘साइन्स लिएर पढ्ने...’ यत्ति वाक्यले म अचानक गलेँ । म्याथ खास जान्दिनथेँ ।
कसरी पढ्ने साइन्स ? साइन्स नपढी कसरी बन्ने डाक्टर ?
सबैजसो साथीहरू साइन्स पढ्ने तरखरमा थिए । कोही काठमाडौँ जाने भन्थे, कोही इन्डियाको मद्रास, कोही बुटवल, कोही पाल्पा । मेरो ठेगान थिएन । मन त मद्रास जाने थियो, कहिल्यै नगएको ठाउँ । बुवालाई एकदुई फेर भनेको पनि थिएँ । कड्किनुभो, ‘काँ जानी हो इन्डिया ! पर्दैन ।’ त्यसपछि बल गरिनँ ।
‘त्यसो भए काठमान्डु जान्छु । साइन्स पढ्छु ।’ एक दिन निर्णय सुनाएँ ।
‘म्याथ जान्दैनस्, अंग्रेजी जान्याछस् ।
त्यै पढ् ।’
‘ह्वाँ साथीहरू साइन्स पढेर डाक्टर हुनी अरे । सबै साथी डाक्टर हुनी भए मचाहिँ कन्डक्टर हुनी ?’ फन्किएँ ।
छोरोको पढ्ने रहरमा बुवा तगारो बन्नुभएन । कुनचाहिँ बाबु बन्न सक्थ्यो र ?
र, काठमाडौँ जाने दिन आयो ।
काठमाडौँमा मसँगै बस्ने र पढ्ने भनी साथी सन्तोष प्रस्ताव लिएर खोइ कताबाट आयो । ऊ म्याथमा तगडा । म अंग्रेजीमा । जोडी जम्ने भो भन्ने लाग्यो बुवालाई । अब केही उज्यालिनुभयो ।
जानुभन्दा अघिल्लो साँझ ममी राति अबेरसम्म बसेर गुन्द्रुक, मस्यौरा, घ्यू पोको पारिबसेको ट्वाल्ल परेर हेरेँ । गुँड छाडी जान थालेको हुर्कंदै गरेको बचेरोको पँखेटा बलियो पारिदिने प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो ममी । घर छाडेर जानुपर्दाको गह्रुंगो मन तर भर्खर युवक हुँदै गरेको पठ्ठोको जोसमा थिएँ ।
भोलिपल्ट बिहान तौलिहवाबाट काठमाडौं जाने डाँफे चढयौँ । बसपार्कबाट छुटेको बस प्रशासन कार्यालयनिर रोकियो । केही मान्छे चढे । कोइराला अंकल पनि चढे । मलाई र बुवालाई बसभित्र सँगै देखेपछि अंकल नजिकै आए ।
‘कता हिँड्नुभो त बाउछोरा नै ?’
‘काठमान्डु जान लाको । यो उतै पढ्छु भन्छ ।’ बुवाले मतिर हेर्नुभो ।
‘के पढ्नी बाबु ?’ अंकलले मलाई हेरे ।
‘साइन्स !’ आँखा जुधाएर नडराई भनेँ ।
‘सक्छौ त ?’ गिज्याएझैँ मानेँ ।
‘पढे त सकिहालिन्छ नि,’ कड्किएँ । जोसिलो केटोलाई ‘तैँले सक्छस् र ?’ भनेको मन परेको थिएन ।
मुठ्ठी कसेर आँखा चिम्लिएँ, ‘जसरी पनि पढ्छु, पास हुन्छु ।’
दाइहरूको नजिक, एउटा कोठामा डेरा पाएँ । केही कलेज घुमेपछि (त्यतिबेला) ताहाचलमा रहेको बर्नहार्ट कलेजमा भर्ना भएँ । सन्तोषचाहिँ अस्कल जान थाल्यो । भर्नासर्ना, ड्रेस गर्दा लगभग ३९ हजार खर्लप्प तिर्नुपर्‍यो । त्यो एकदम ठूलो रकम थियो हाम्रा लागि ।
म भर्ना भएपछि बुवा घर जाने हुनुभो । बसपार्क पुर्‍याएर कोठामा फर्केपछि घोप्टो परेर रोइरहेँ । सन्तोष केही नबोली बसिरहयो ।
अब कलेज नियमित जान थालेँ । शनिबार घर फोन गर्थेँ । अरू दिन मिनेटको १४ रुपैयाँ थियो, शनिबार ७ । बाआमासँग फोनमा कहिले रुन्थेँ, कहिले झर्किन्थेँ, कहिले खुसी पनि हुन्थेँ । पढाइको अधिक प्रेसर थियो । जिन्दगीमा कहिल्यै पढ्नु नपरेको मोटो ठेली म्याथ, फिजिक्स र केमेस्ट्रीको किताबले हायलकायल पारेको थियो ।
त्यस दिन बसमा भेटिएका कोइराला अंकल टनिक भइदिएका थिए । बसको संवाद बेलाबेला सम्झन्थेँ र डेरिभेटिभ र लिमिटका अप्ठयारा हिसाब अर्को एकपल्ट गरेर मिलाउन तम्सिन्थेँ ।
अंग्रेजी, जुलोजी र बोटनी बडो रुचिसाथ पढ्थेँ । जब पालो म्याथ, फिजिक्स र केमेस्ट्रीको आउँथ्यो अनि कुरो अर्कै भइहाल्थ्यो । अंग्रेजीको होमवर्क गर्दा हात सलल बग्थे । अरू विषयमा त्यही हातमा दही जम्थ्यो ।
म्याथका हिसाब नजान्दा बेकारमा पढिएछ भन्ने झल्को आउन थाल्यो । तर, बेलाबेला उनै कोइराला सर झुल्कन्थे दिमागमा ।
सन्तोष खुरुखुरु कलेज जान्थ्यो आउँथ्यो । पढ्थ्यो । उसले मिलाएको हिसाब देखेर ईष्र्या लाग्थ्यो । ‘मलाई किन आउँदैन यार यसरी ?’ आफैँसँग मुर्मुरिन्थेँ ।
र, फस्र्ट टर्म जाँच दिएँ । दसैँतिहार बिदामा घर जाने दिन आयो ।
बिदा नै त थियो, सकियो पनि !
बिदापछाडि कलेज खुलेको एकाध दिनमा रिजल्ट आयो ।
र, म फेल भएँ!!
अंग्रेजी, जुलोजी र बोटनीबाहेकका विषयमा तारा लागे ! जिन्दगीमा पहिलो पटक फेल भएँ !
म फेल भएँ !’
फेलै भएँ !
मजस्तो काम नलाग्ने, लद्दु, खत्तम, खैँराते विद्यार्थी कोही छैनजस्तो लाग्यो । निराशाले खर्लप्पै संसार निल्यो । एकमन लाग्यो मर्छु ! यस्तो फेल हुने विद्यार्थीको काम के संसारमा ?
यो बेला कोइराला अंकल कहाँ गए कुन्नि ! पटक्कै आएनन् टनिक बनेर । म अचानक होमसिक र होपलेस भएँ । घर जान्छु, पढ्न अब सक्दिनँजस्तो लाग्न थाल्यो ।
भोलिपल्ट सन्तोष रुँलारुँला जस्तो गरी हुर्रिएर एक्कासि कोठामा आयो । खाटमुनिको लुगा तानेर पटयाउन थाल्यो । लगभग रोएरै ।
‘के भो सन्तोष ?’ सोधेँ ।
‘म घर जान्छु यार ।’ उसको स्वर भासियो । ‘म सक्दिनँ यार काठमान्डु बस्न । बुवाआमा, बहिनी, भाइको धेरै याद आयो ।’
म अवाक् भएँ । मान्छेलाई अति दु:ख परेर रोइरहँदा के भनेर सान्त्वना दिन्छन् अहिले लगभग १७, १८ वर्ष बितिसक्दा पनि जानेको छैन ।
‘नजाऊ न यार ।’ म पिलपिलिएँ ।
‘म जान्छु शिव । तिमी पढ ।’ ऊ नाडीले आँखा पुछ्दै रुन थाल्यो ।
‘तिमी म्याथ जान्ने मान्छे नै हारेर गयौ भने त म पढ्न झन् कसरी सक्छु ?’
फुल्याउन खोजेँ ।
र, नाइट बसमा जाने भनेर सन्तोष झोला बोकेर हिँडिहाल्यो । हत्केलाले आँसु पुछ्दै ऊ सिँढीबाट तल झरेको हेरिरहेँ, एकदम अवाक् भएर ।
अब मेरा नौनाडी गले, ज्यान शिथिल भएर फत्रक्क भयो, खल्खली पसिना आयो, सय कोस पार गरेपछिको थकाइले चुर छुजस्तो लाग्यो । घाँटीभित्र ब्लेड अड्क्योझैँ लाग्यो । आखिर सन्तोष त गयो । यही कहानीले म गल्न थालेँ ।
भोलिपल्ट गह्रुंगो मनसहित कलेज पुगेँ । सिधै पुरुषोत्तम सरको कोठामा छिरिहालेँ ।
‘सर म फेल भएँ ।’ एक्कैचोटि पिलपिलिएँ ।
‘केही हुन्न नआत्तिऊ । बल्ल फस्र्ट टर्म त गाछ ।’ सरले अँगाले मलाई ।
‘सर म घर जान्छु । सक्दिनँ पढ्न ।’ अचानक आफ्नो निर्णय सुनाएँ ।
‘यस्तो नभन बाबु । एलएलसीपछि एकदमै गाह्रो हुन्छ सबैलाई । तिमी मात्रै होइनौ ।’ सरले अँगालेकै थिए ।
‘नाइँ सर । कहिल्यै फेल भएको थिइनँ । पढेकै थिएँ ।’ रुन थालेँ ।
‘फाइनल एक्जामसम्म राम्रो माक्र्स ल्याउँछौ । नआत्तिऊ । पास गराउने जिम्मा हाम्रो ।’ सर बोल्दाबोल्दै म भक्कानिएँर हिँडेँ ।
कोठामा आएर बेस्कन रोएँ । बाआमा र हजुरआमा सम्झिँदा झन् रुन आयो । केही बेरपछि घर फोन गर्न पीसीओ छिरेँ ।
‘बुवालाई बोलाइदे ।’ दिदीले फोन उठाएकी थिई । यत्ति भनेर ढयाप्प फोन राखेँ । एकै छिनमा फेरि गरेँ ।
‘हेलो...’ बुवाको आवाज सुनेर भक्कानिएँ ।
‘के भो बाबु ?’
म रोइरहेँ ।
‘के भयो भन्त...’ डरको धुन बुवाको स्वरबाट बगेको बुझेँ ।
‘बुवा मैले सकिनँ । म घर आउँछु । म फेल भएँ ।’ एकैसासमा सुनाएँ ।
‘हँ ???’ आश्चर्यचकित हुनुभो बुवा । त्यसपछि धेरै बेर म बोलिनँ । सुँक्कसुँक्क गरिरहेँ । उता बुवा पनि बोल्नुभएन ।
‘आइज त तेसो भा...’ यो वाक्य सुनेपछि शरीरमा परान भरिएझैँ मानँे । हलुका
महसुस भयो ।
‘भोलिको डाँफेमा आउँछु ।’ जाने
पक्का भएँ ।
अब, दाइहरूलाई पनि भनेँ । सम्झाउन खोजेका थिए । संघर्षको परिभाषा दिएका थिए । तर, फेल भएकाले बडो ठूलो चोट परेको मलाई कसैले भनेको मान्न सकिनँ । कोठाका खाट, टेबललगायतका खत्रामत्राङ दाइको जिम्मा लगाएर म घर हिँडँे ।
घर पुगेपछि मान्छेहरूले किन आइस् ? सोध्नेवाला थिए । ‘घरबाट टाढा बस्न सकिनँ’ भनेर उत्तर त दिम्ला, तर ‘एसएलसीमा फस्र्ट डिभिजन ल्याएको मान्छे पढ्न सकिनस् ?’ भने के उत्तर दिने ? उत्तरको खोजीमा दिनभर बसमा रन्थनिएँ ।
घर पुगेर झोला बिसाउँदा साँझ ढल्किँदै थियो । सिधै कोठामा पसेर खाटमा डङ्रंग पल्टिएँ । फनफनी नाचिरहेको पंखा एकटकले हेरिरहेको थिएँ । कोठामा हजुरी पस्नुभो । मछेउ आएर बस्नुभो । मेरो हात समाएर भन्नुभो, ‘के भयो नाति ?’ हजुरीलाई ट्वाल्ल परेर हेरिरहेँ, किनभने घाँटीबाट आवाज आइरहेको थिएन ।
‘अब के गर्चस् त ?’ सोध्नुभो । मलाई रुन मन लागेको थियो । सम्हालिएँ । जिब्रो बाहिर निकालेर ओठको छेउमा लगेँ, जिब्रोलाई दाँतले थिँचेँ, टाउको ढल्काएँ, अनि दुवै आँखा आधा चिम्लिएँ ।
‘धत्, के भनेको हो ?’ डरको कम्पन हजुरीको बोलीमा आएको थियो, ‘फेरि पढ् । यैँको केम्पसमा पढ् । आमाले भात पकार ख्वार पठाउँचिन् । घरको भात खा, पढ्न जा ।’ म बोलिनँ । मेरो हात समाएर धेरै बेरसम्म कोठामा बसिरहनुभयो हजुरी । हजुरीको त्यतिबेलाको साथ मेरा लागि जीवनभरको तागत बन्यो ।
बुवा मसँग रिसाएको अनुभव गरिसकेको थिएँ । म बोल्दा मन लागे सुन्ने, नलागे एकातिर हिँड्ने गर्नुभयो ।
भोलिपल्टबाट टोलमा अनगिन्ती प्रश्नको रकेट बर्सन थाले, किन फर्किइस् ? त्यत्रो फस्र्ट डिभिजन आएकाले पनि पढ्न सकिनस् ? आखिर किन बस्न सकिनस् ?
कपिलवस्तु बहुमुखी क्याम्पसमा अंग्रेजी मूल विषय राखेर भर्ना भएर एक दिन घर फर्किंदै थिएँ । बाटोमा उनै कोइराला अंकल भेट भए । म लाज र डरले इत्रिएँ । चलाइरहेको साइकल मेरो छेउमा रोकेर टक्क अडिए कोइराला अंकल । र, भने, ‘केइ भाछैन बाबु । नआत्तिऊ । अब घरमै बसेर राम्ररी पढ है ।’ मुस्कुराउँदै अघि बढे अंकल । म वाल्ल परेँ ।
बिस्तारै म घरबाटै बाहिर निस्कन एकदमै कम गरेँ । बुवा मसँग नबोल्नुभएको हप्ता बित्यो, महिना बित्यो । हुँदाहुँदा वर्ष नै बित्यो ।
एक दिन, आईएको रिजल्ट लिएर घर आएँ । अफिसबाट घर आएर बुवाले चिया सुर्काइरहनुभएको थियो ।
‘रिजल्ट आयो बुवा ।’ एकतर्फी संवाद सुरु गरेँ । बुवाले थाहै नपाएझैँ, मेरो कुरै नसुनेझैँ गरेर चियातिरै ध्यान दिनुभो ।
‘बुवा मैले आईए टप गरेँ । त्यैभर २५ सय रुपियाँ क्याम्पसले दिने अरे !’
दुई वर्षसम्म नबोल्नुभएको बुवा यसपालि बोल्नुभो । बुवाको ओठमा सूर्यमुखी फुल्यो, मलाई गम्लङ्ग अँगालेर भन्नुभो, ‘स्याब्बास् केटा !’